Trading Bots maka Cryptotrading - Blockchain News
Ka 10, 2018 admin
Trading Bots maka Cryptotrading
Olee otú bots na-arụ ọrụ maka cryptotrading?
Bots adị n'ụdị software, nke, ọtụtụ mgbe, na-arụ ọrụ kpọmkwem kaadị-mgbanwe site na usoro ihe omume interface (API). Ihe mgbaru ọsọ nke bots bụ na-akpaghị aka ịrụ azụmahịa na akụ: maka nke a, na bots na-eduzi a zuru ezu analysis of ahịa ozi na, dabeere na data nwetara, na-eme mkpebi na-agba azụmahịa. Dabere na họọrọ atụmatụ, ịtọ parameters na setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ, a ahia nwere ike họrọ otu n'ime anọ na ụdị nke bots:
trading bots inyocha ihe ọmụma natara site kaadị-exchange, na-eme mkpebi banyere ịzụ na n'ire nke cryptocurrency dabeere na parameters họọrọ ahia. Nke a na ụdị bots nwere ike ahaziri na-arụ ọrụ na ọtụtụ afọ otu mgbe, ma ọ bụ i nwere ike iji predefined azum na e mepụtara site na nnyocha.
Arbitrage bots nyochaa mgbanwe kwuru nke Cryptocurrency dị iche iche mgbanwe na-akpaghị aka ka azụmahịa nweta uru site na price iche.
omenala bots, ma ọ bụ iji bots, na-eji mee ka azụmahịa na predefined parameters na-odụk aka ma ọ bụ na-ahọrọ na akpaka mode.
edemede bots adị n'ụdị isi software, na ndabere nke ahia nwere ike onwe hazi ọrụ nke bot. Mee site ahụmahụ ahịa ndị mara intricacies nke trading na kaadị Market.
Ize ndụ na Trading Bots na kaadị Market
ezughị oke software: ọ bụghị ihe niile ugbu a bots na-ulo oru site na a ìgwè ndị ọkachamara na mmepe na ahụmahụ kaadị ahịa. Ọzọkwa, na bot, onye code mmehie e mere, nwere ike ọ bụghị naanị ịbụ adighi ike, kamakwa ime ka ịrịba ego funahụrụ, karịsịa na Nchikota na a-agụghị oké họọrọ atụmatụ. Ya mere, maka erekwa ọ bụ uru ị na-ahọrọ naanị nwapụtaworo bots na a pụrụ ịdabere na aha na a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ.
Ozugbo ida nke cryptocurrency: cryptocurrencies bụ nnọọ obodo akpan owo, bụghị ịnshọransị megide collapses. Ya mere, na June 2017, na GDAX exchange, dị ka a N'ihi nke a isi deal, price nke ikuku ama esịn si $ 319 ka 10 cents. N'ihi ya, ahịa na-adịghị ka nkwụsị-ọnwụ ókè, na a okwu nke sekọnd, tara ahụhụ nnukwu losses. Na ndabere nke a, ụfọdụ ahịa nwere obi ike na bots na-enwe ike na-arụ ọrụ naanị na ahụkarị ọnọdụ na ihe nwere ahia ga n'ụzọ ziri ezi karị ịkọ ọnọdụ na ahịa.
wayo: na unregulated ahịa, cryptocurrency ikpe nke wayo ime ezi mgbe, na-arụ ọrụ na bots sokwa. na December 2017, na Hexabo ojoro bot ifịk ifịk ejikwara na ahịa, igbochi onye ọrụ ego, suspending na mmepụta nke kaadị ego, na mgbe ahụ kwụsịrị na-arụ ọrụ, Ikekwe site n'izite niile ego mmepe nke n'elu ikpo okwu. Ọzọkwa, dị ka otu ahia, ị kwesịrị izere ewu ewu free bots, n'ihi na ọnụ na ha na ị nwere ike ibudata obi software, nzube nke nke bụ inweta ohere ka onwe wallets igodo ma ọ bụ jiri ahia si ọnụ maka na Ngwuputa.
Popular Bots maka Cryptotrading
3commas bụ a na-ewu ewu na-akwụ ụgwọ bot maka akpaghị aka cryptotrading, nke na-arụ ọrụ dị otú ahụ na mgbanwe dị ka Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi na YOBIT. Ọ na-enye a nnukwu nhọrọ nke dịgasịa portfolios na ọrụ nwere ike na-ahọrọ na-etinye ego ma ọ bụ iji dị ka ihe gbasara nyocha ngwá ọrụ soro ahịa ọnọdụ. Ọ na-enye maka imekotaotuugbo ojiji nke stop-ọnwụ iwu na iri uru. Ọ nwere anọ na ndenye aha na-etoju – “mbụ” maka $ 30, “trading” maka $ 50, “Professional” maka $ 100, na kwa “onye” maka nkwekọrịta.
Cryptohopper bụ a ígwé ojii dabeere na ugwo bot nke ga-ọbụna ma ọ bụrụ na ozu ahia si na kọmputa bụ offline ma ọ bụ gbanyụọ. Ahụmahụ ahịa nwere ike onwe hazie ọrụ nke bot, mgbe beginners nwere ike iji dị “autopilot”. The bot nwekwara ike nyochaa na nyochaa irè nke trading usoro n'ókè mere n'oge gara aga (backtest), nwere a Kwụsị Loss iji akara algọridim, na nwere ike ahia na na ọtụtụ mgbanwe. Ọ nwere atọ ụdị nke ọnwa ndenye aha – maka $ 19, $ 49 na $ 99. A ọzọ zuru ezu analysis nke n'elu ikpo okwu nwere ike ịchọta ebe a.
Cryptotrader bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ígwé ojii cryptobots maka trading. Na-akwado a ukwuu nke kaadị-ego na mgbanwe. Ga-n'ụzọ zuru ezu ahaziri njirimara. Enyele backtesting usoro ahịa ọrụ, nke na-enye ohere ka ndị ọrụ na ahia azum. Ọ nwere ise-etoju nke ọnwa ndenye aha: maka 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC na 0.0214 BTC.
Haasbot bụ a ikpo okwu maka akpaghị aka trading, bu n'obi, na mbụ, n'ihi na ahụmahụ bitcoin-azụ ahịa. Eji azum ewepụtara technical analysis data. Nke a bot na-akwụ ụgwọ na e nwere ihe atọ na ọkwa nke-enwe kwa afọ na ndenye aha: akwụkwọ ikike “mbido” maka 0.073 BTC, “Simple” maka 0.127 BTC na “Extended” ikike, nke na-akwụ ụgwọ 0.208 BTC. Dabere na ikike zụrụ, ọrụ nwere ike hazi ọtụtụ interconnected bots ga-enwe ike ịrụ a ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche ọrụ.
Gekko bụ a free oghe iyi bot nwere ike ibudata na GitHub. Ọ dị mfe iji na-eji, nwere akowaputara nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nke ga-bara uru n'ihi na-enweghị uche na-azụ ahịa. Nwere a adaba interface, nwere ike backtest azum na iji anya nke uche na-arụpụta nke trading. Ọzọkwa, na bot software na-agba na kasị sistem.
Zenbot bụ ihe ọzọ na-emeghe isi bot maka bitcoin ahịa. The bot ọrụ nwere ike ibudata na koodu na-eme ka mgbanwe na ya ọrụ, na ya algọridim bụ maka isi sistem. na, n'adịghị Gekko, Zenbot pụrụ ịrụ elu ugboro azụmahịa na itinye arbitrage ohere. Otú ọ dị, na kaadị obodo ọ na-ahụ kwuru na bot bụghị e emelitere ruo ogologo oge, ya mere nwere ohere na-arụ ọrụ na ọhụrụ na-ewu ewu mgbanwe.
Bots maka Cryptotrading